Vanhu vatatu vakauraiwa muBurbakh pamusoro pechinzvimbo chaMuporofita Muhammad
Vanhu vatatu vafa muguta reIndia reBashington mushure mekunge mapurisa apfura vanhu vazhinji vachiratidzira kunyomba Facebook.
Mapoka akaungana panze pemusha wemutungamiriri wezvematongerwo enyika ane hama yaipomerwa mhosva yekuita "zvinogumbura" nezveMuporofita Muhammad.
Vakavesa mota moto ndokurwisa mapurisa vasvika panzvimbo iyi nematombo, mapurisa akaudza BBC Hindi.
Mapurisa akasunga murume uyu, pamwe chete nevamwe vanhu 110 vaive muchaunga.
Commissioner weguta, Kamal Pant, vanoti mapurisa anosvika makumi matanhatu, kusanganisira vakuru vakuru, vakakuvara mumhirizhonga yakaitika neChipiri manheru. Nguva yekudzidziswa yakaiswazve mumatunhu maviri emapurisa eguta, akadaro.
Zvichakadaro, mapurisa emuguta akatepfenyura kuti zvinhu "zvaive pasi pesimba", achiwedzera kuti vashandi vakadzinga mambishi kupaza mhomho chete mushure mekushandisa gasi remisodzi nemabheoni.
Rufu urwu rwakasimbiswa neGurukota rezvemukati meNyika yeKarnataka, iro Bangalore ndiro guta guru.
Mhirizhonga iyi yakatanga mushure mekunge varatidziri vakaungana panze pemba yemapurisa uye neyemapurisa mushure mekuwona chinzvimbo ichi, icho chinonzi nevatori venzvimbo chakabviswa.
Zvichakadaro, gurukota rezvemitemo, Akhanda Srinivas Murthy, vaita vhidhiyo kukwikwidza kuti varatidziri varambe vakadzikama uye vavimbisa chivimbo.
"Ndinokumbira hama dzangu dzeMuslim kuti dzisarwire munhu akatyora mutemo." Chero nzira, isu tese tiri hama. Ani naani ane basa, isu tichava nechokwadi chekuti chakakodzera chirango chinorongedzwa kune avo vane mhosva. Ndinemwi, ”akadaro kwandiri.
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53747331
Kuratidzira kwa Mrc kwakarongwa muna Nyamavhuvhu 14 kwadzimwa
INNOSS'B KUTENDA FERRE GOLA HERITIER WATA, FABREGAS NA CELEO SCRAM PONA SUPPORT YA OLANDI - Vhidhiyo